Fihla eCape Breton Canso Causeway
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAndré & Donna
Le ndlela yokuphumla, iphangaleleyo ifumaneka kumanzi endlela yeCape Breton Island kunye nelizwe laseNova Scotia. Ikhutshiwe kwaye iyimfihlo kakhulu kodwa imizuzu ukusuka kwidolophu yasePort Hawkesbury.
Thatha uhambo lweyure ukuya e-Inverness Beach Boardwalk kwaye udlale umjikelo wegalufa kwiWorld Famous Cabot Links okanye umgama ongama-30 wemizuzu ukuya kumanzi azolileyo nashushu kunxweme lwasePort Hood.
Isiqalo esihle sokuhamba kwindlela yeCabot ebukekayo.
Awuyi kufuna ukuhamba! ❤️
Ngaphezulu kweehektare ezi-4 zomhlaba kunye ne-365 ft yamanzi angaphambili. Ininzi indawo ekhoyo yokupaka kunye nokujika iimoto ezinkulu. Imizuzu kuphela ukuya kwiTrans Canada Recreational Trail nakuzo zonke izinto zakho eziluncedo. Indawo efanelekileyo yokukhenketha kwiSiqithi saseCape Breton.
Eli khaya lingasese, labucala kunye neliphangaleleyo likwiNdlela ye-19. Imizuzu yokuya kwimyuziyam kunye ne-ice cream stand; iziko lolwazi & ivenkile yezipho; kunye neendawo zokutyela kunye neevenkile.
Umbuki zindwendwe ngu- André & Donna
I work in the oil and gas industry, and Donna as a Clinical Therapist in Nova Scotia. We love to travel and enjoy the outdoors.
Qhagamshelana imini yonke njengoko kufuneka.
Kuphela iminxeba engxamisekileyo ebusuku.
UAndré & Donna yi-Superhost
Inombolo yomthetho: RYA-2021-06041339129965025-483
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- New Town